MATUPI TIMES OLTHANG - Page6of6-
BURMESE March 22, 2020
ကျောက်တော်မှာ တိုက်ပွဲတွေကြောင့် ဒေသခံ ၄၀၀၀ နီးပါး ထွက်ပြေးနေရ
ရခိုင်ပြည်နယ် ကျောက်တော်မြို့နယ်နဲ့ ချင်းပြည်နယ် ပလက်ဝမြို့နယ်တွေမှာ တပ်မတော်နဲ့ ရက္ခိုင့်တပ်တော် AA တို့ ဒီရက်ပိုင်းတွေမှာ တိုက်ပွဲတွေဆက်တိုက်ဖြစ်နေလို့ ကျေးရွာ ၁၆ ရွာက ဒေသခံတွေ ကျောက်တော်မြို့ပေါ်ကို ထွက်ပြေးရောက်ရှိလာပါတယ်။ မနေ့ကအထိ လူဦးရေပေါင်း ၃၅၀၀ ကျော်ရှိနေပြီး ဒီကနေ့ ထပ်တိုးလာနိုင်တာကြောင့် ၄၀၀၀ အထိ ဖြစ်လာနိုင်တယ်လို့ ကျောက်တော်မြို့နယ် ပြည်နယ်လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ် ဦးမောင်လှကျော်က ပြောပါတယ်။ ကျောက်တော်နဲ့ ပလက်ဝမြို့နယ်အကြားက ကျေးရွာတွေအနီးမှာ မတ်လ ၈…
BURMESE March 21, 2020
သုဝဏ္ဏမြို့နယ်အတွင်း တရုတ် ၁၀၀ ကျော် နေထိုင်နေသည့် အိမ် ၂ အိမ်ကို သက်ဆိုင်ရာက ဝင်ရောက် စစ်ဆေး
ဧရာဝတီ၊ မတ် ၂၂ ရက်၊ ၂၀၂၀ ခုနှစ်ရန်ကုန်မြို့၊ သုဝဏ္ဏမြို့နယ် အတွင်း ဌာနဆိုင်ရာသို့ အသိပေး တိုင်ကြားထားသည့် လူဦးရေထက် ပိုမိုနေသည်ဟု ဆိုသည့် တရုတ်လူမျိုးများ နေထိုင်ရာနေအိမ် ၂ အိမ်အား သက်ဆိုင်ရာဌာနများမှ မတ် ၂၁ ရက် ညပိုင်းက စတင်ကာ ယခု အချိန်ထိ ဝင်ရောက်စစ်ဆေးနေသည်။ ဖြစ်စဉ်မှာ မတ် ၂၁ ရက်နေ့ ည ၉ နာရီဝန်းကျင်ခန့်တွင် သုဝဏ္ဏမြို့နယ်…
MATU March 21, 2020
Ka uem pui tangkik! Joseph Oxygen Matupi.
Bawipa lawh thlangrhen thlangbomna lungbui theen n’paek tih kopoek lungbui theen na khueh te Dilai han ah yothennaalen bik ni. Matu Ram ah khodenglungma , cadah harah, kothae lungma duekhingaka tawng…
Vuhan virus kawng ( 2019 Novel Corona virus ( 2019 – nCov)
Hekah Vuhan Virus (Corona) tloh mitah Taluk ram Vuhan kho lam kah atong tloh pakhat la om. Ta­lukram kah tloh mi ngai thuen naham la adang ka bang la ol kang uen uh. (1) Hlangmi…
Matupi Cangbong Pilnam rhoek tah Pang nah ol
Februaey25, 2020; Matupi kho puei khui kah tui cak tah kaisiyung lam kaloh tui ayet koek aloh tih pilnam loh acak la om. Tekah akhui ah Cangbong vang tah tui ayol dong ah Vuitu kho…
Matupi Peng NLD Yung Thai Ong Nah Poei Asai Uh
February 25, 2020; Matupi peng National league For Democracy yung puei ong nah atue tah mincang khonoek lung 8:00 ah asai uh. Terkah ong nah poei atah Chin NLD party Chairman Pa Zo Boi, Mangpa…
Uncategorized March 21, 2020